Mujaahid Cali Guray oo Ku Biiray Xisbiga KULMIYE – WARSOOR
Hargeysa – (warsoor) – Mujaahid Cali Guray ayaa maanta oo Axad ah ku dhawaaqay inuu si rasmi ah ugu biiray xisbiga KULMIYE. Mujaahid cali guray ayaa kaga dhawaaqay ku biiristiisan ka dib markii uu maanta ka soo baxay shirkii garabka dhaliyaradda ee xisbiga KULMIYE oo ka dhacay huteel Maansoor ee magaaladda Hargeysa.
Mujaahid Cali Guray ayaa la arkaayey iyaguun laabta ay isgalinayaa gudoomiyaha ahna musharaxa xisbiga KULMIYE.
Mujaahid Cali Guray oo si ba’an u naqdin jiray xisbiga KULMIYE ka dib markii uu ka baxay 2009, ayaa maanta sheegay in aanay jirin cid kale oo dalka hogaamin karta oo codkiisa siin karo oo aan ka ahayn musharaxa xisbiga KULMIYE Muuse Biixi Cabdi.
Halkan ka daawo waxa uu ka yidhi ku biiristiisa xisbiga KULMIYE:
Dagaal ka socda Galbeedka Kismaayo